फिटनेसः तौल घटाउने प्रभावकारी व्यायाम | Indrenionline.com
मोटोपन भए के गर्ने ? धेरैलाई लाग्छ, ‘खान छाड्ने ।’ नियमित खुराक कटौती गरेपछि मोटोपन बढ्दैन भन्ने लाग्छ । तर, मोटोपन घटाउने प्राकृतिक काइदा भनेको शारीरिक श्रम नै हो । अर्थात वर्कआउट, व्यायाम ।
यद्यपी धेरैलाई व्यायाम गर्नु झन्झटिलो लाग्छ । कतिलाई जाँगर चल्दैन । यस्तो अवस्थामा कसरी व्यायामको सुरुवात गर्ने ?
कतिपयको अवस्था के हुन्छ भने, समान्य हिँडडुल गर्दा पनि सास बढ्ने । उनीहरु निहुरिन सक्दैनन् । दौडन सक्दैनन् । यस्तो भद्दा शरीर हुँदा व्यायाम गर्नु कठिन हुने नै भयो ।
त्यसैले, यस्ता व्यक्तिले तौल कम नै गर्ने हो भने विशेष तरीका अपनाएर व्यायाम गर्न सुरु गर्नुपर्छ । जसले गर्दा उनीहरुलाई एक्सरसाइज गर्न सजिलो पनि होस् र चाहे जसरी तौल कम गर्न पनि सकियोस् ।
थोरै थोरै एक्सरसाइज गर्ने
धेरै मोटो भएकै कारण एक्सरसाइज गर्न सकिएको छैन भने हल्काफुल्का व्यायाम गरेर पनि पनि व्यायाम गर्न सकिन्छ । यसको लागि मर्निग वाक उत्तम विकल्प हुनसक्छ । विहान विहान नियमित रुपमा करिब आधा घण्टा मर्निक वाक गर्नाले मात्र पनि शरीरमा निकै ठूलो परिवर्तन देखा पर्छ ।
मर्निङवाक गरेमा शरीरमा रक्तसञ्चार प्रभावकारी ढंगले हुन्छ । शरीर फुर्तिलो रहनुका साथै मुटु स्वस्थ रहन्छ । त्यतिमात्र हैन, नियमित रुपमा हिडेमा शरीरको वोसो कम भएर तौल स्वत कम हुँदै जान्छ । यदी कोही व्यक्ति मोटो भएकै कारण धेरै ँहिड्न सक्दैन भने सुरु सुरुमा कम्तीमा बीस मिनेट भएपनि हिँड्नै पर्छ । पछि विस्तारै विस्तारै हिँडाईको रफतार र समय बढाउँदै लैजान सकिन्छ ।
मोटो व्यक्तिलाई सुरु सुरुमा स्टे्रचिङ्ग गर्न अप्ठेरो हुनसक्छ । यदी साच्चै नै स्टे्रचिङ गर्न गार्‍हो छ भनेर हल्का टहलिनु पनि काफी छ । तर टहििलन सुरु भएको एक दुई हप्ताबाटै हातखुट्टालाई तन्काएर स्ट्रेचिङ्ग भने अवश्य गर्नु पर्छ । हात ताथ खुट्टाको स्ट्रेचिङ्ग गर्दा हातलाई फैलाएर खुट्टाको बलले हल्का उप्रmनुपर्छ ।
दौडन तथा स्ट्रेचिङ सुरु गरेको करिब एक हप्ता पश्चात्त नै जस्तोसुकै मोटो व्यक्तिले पनि हल्का एक्सरसाइज गर्न सक्दछन् । तर त्यसको लागि दौडन तथा स्ट्र्ेचिङ गर्न भने छोड्नु हुँदैन ।
एक पटक यी व्यायाम सुरु गरिसकेपछि विस्तारै विस्तारै अन्य व्यायाम गर्न पनि शुरु गर्नुपर्छ । यसरी व्यायाम गर्दा खासै समस्या हुँदैन, जुन सुरुवाती चरणमा हुन्थ्यो । र, व्यायामको समयलाई क्रमश बढाउँदै लैजानुपर्छ । एकै पटक धेरै व्यायाम गर्न सकिदैन भने पनि समस्या छैन । दिनमा दुई/तीन पटक विभिन्न किसिमका व्यायाम गरेर पनि शरीरलाई फिट एवं स्वस्थ राख्न सकिन्छ । अनलाइनखबरबाट
Previous: राजनीतिक दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने ओली र प्रचण्ड सहमत
Next: एसईई परीक्षाको नतिजा प्रकाशित